Jasiiradaha ugu quruxda badan Boortaqiiska | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Jasiiradaha, Portugal
Shaki la’aan Portugal Waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee xagaaga loo tago kuwa ku nool meelaha ugu qabow Yurub. Laakiin marka laga tago quruxdeeda qaaradda iyo xeebteeda jannada, waddanku wuxuu leeyahay jasiirado qurux badan, mid walbana qaabkeeda u gaar ah.
Waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan jasiiraddan Bortuqiisku waa in cimiladu tahay kulayl sannadka oo dhan, markaa waad qorshayn kartaa booqashada aad jeceshahay. Maanta, markaa, jasiiradaha ugu quruxda badan ee Portuguese, kuwa aadan seegi karin xagaagaaga.
Boortaqiisku wuxuu leeyahay jasiirado faro-ku-tiris ah oo runtii ah goobo yar yar oo halkee ku yaal cimiladu waa diiran sanadka oo dhan. Maanta waxaan ka hadlaynaa Jasiiradda Sao Miguel, Cape Verde, Armona Island, Madeira, Flores, Terceira, Pico, Porto Santo, Da Tavira Island iyo Faial Island.
La Jasiiradda Sao Miguel Waa jasiirad weyn oo la baadho oo la qaddariyo. Waa qayb ka mid ah kooxda Jasiiradaha Azores waana kooxda ugu weyn. Ayaa badan Calderas fulkaane oo si sax ah asalka awgood waxaa jira ilo badan oo kulul. Waqtiyada qaarkood ee sanadka, marka lagu daro, xeebta waad arki kartaa nibiriyada iyo hoonbarrooyinka oo xitaa waad sameyn kartaa safarro si aad ugu bogto xayawaankan. Waxaad ku imaan kartaa halkaas diyaarad, waxaa jira garoon diyaaradeed, iyo waqtiga ugu fiican ee la tagi karaa waa inta u dhaxeysa Abriil iyo Nofeembar.
Jasiirad wanaagsan oo lagu nasto ayaa caan ku ah Cabo Verde, inkasta oo ay ku taal Mozambique. Waa xiddig jasiiradaha fulkaanaha, toban wadar, leh dhammaan cimilada miisaaman. Taasi waa, cimilada ayaa qalalan, badanaa ma ahan kuleyl iyo qabow midna. Isla mar ahaantaana waa goob dhaqan, sababo la xiriira meesha ay ku taallo Afrika.
Waa goob dalxiis oo weyn, caan ah. Caasimaddiisu waa Praia, oo ah halka hoteelada, maqaayadaha iyo kuwa kaleba ay ku urursan yihiin. Waqtiga ugu fiican ee la booqan karaa waa Nofeembar ilaa Juun.
La Ilha De Armona Waxay ka tirsan tahay gobolka Algarve waana meel aad uga fog goobta dalxiiska. Waxay u dhowdahay xeebta gawaari malaha, dad yar oo aad neefsato nasashada kuleylka. Jasiiraddu waxay leedahay xeeb ku taal Atlantic iyo mid kale oo ku yaal Webiga Formosa. Haddii duufaanku hooseeyo, iyagu waa kuwo raaxo leh oo qurux badan barkadaha dabiiciga ah. Waxaa jira godad ubaxyo leh, biyo hufan iyo baarar badan iyo maqaaxiyo badan oo ku yaal meel u dhow diyaaradda ay doontu kugu rido.
Doonta waxay qaadataa oo keliya 20 daqiiqo. Ka baxa Olhao iyo adeegga markabku waa joogto, sanadka oo dhan, inkasta oo ay aad u badan yihiin bilaha xagaaga, Julaay iyo Ogast. Labada dhinac ee dekedda waxaa ku yaal xeebta Ría de Armona, oo leh Calan Buluug ah. Xeebta Atlantic waxay ku taal dhinaca kale ee jasiiradda, safar u jira in ka badan hal kilomitir halkaas oo aad ku arki karto guryaha kalluumeysatada quruxda badan. Waxaad sidoo kale arki doontaa xerada jasiiradda iyo hay'adda dalxiiska ee dalxiisyada laga kireysto.
Si aad xeebta u gaarto waxaad ka talaabeysaa lugo alwaax ah oo dul marta dunes jaalle ah, oo ay dhibco ka buuxaan. Waxaa jira buundo dhanka galbeed ah oo kuu kaxayn doonta qaybta jasiiradda halkaasoo hirarku kor u kacaan kuna dhacaan waxaadna arkeysaa imaatinka iyo socdaalka doonyaha. Xeebta ugu dambeysa waa mid weyn nasiib wanaagna waxaa ku yaal baarka xeebta oo kireysta hammo, dalladaha isla markaana lagu iibiyo cuntada iyo cabbitaannada.
Madeira waa mid ka mid ah jasiiradaha ugu caansan Portugal, Waqooyiga Atlantic. Malaayiin dalxiisayaal ah ayaa booqda sanad walba sidoo kale waxay leedahay jawi aad u wanaagsan. Kaliya maahan xeebaha, haddii kale kaymaha cagaaran oo casuuma sahaminta iyo howlaha sida fuulitaanka faraska, kayaking, golf, paragliding, kalluumeysiga ...
Jasiiradda waa 600 kiiloomitir xeebta galbeed ee Marooko iyo in ka badan ama ka yar isla masaafadaas xeebta Burtuqiiska. Ka taxaddar, Madeira maahan hal jasiirad, laakiin waa jasiirado leh afar jasiiradood oo dhammaantood ka kooban. Waa nooca Boortaqiiska ee Hawaii, oo leh xeebo, volcanoes, lagoons, iyo kaymo.
La Jasiiradda Pico waa Azores waxayna caan ku tahay volcano isku magac ah. Khasnadeeda iyo barta dalxiis ee ugu caansan waa Ponta do Pico, waa buurta ugu dheer dalka. Dabcan, fuulitaanka dusha sare waa waxa aan cidna u seegin. Laakiin wixii intaa ka dambeeya Pico waa jasiirad aad u cagaaran, oo dhadhan fiican leh in la baaro ... oo dhadhamiya. Taasina ma Pico waa soo saare khamri, ma ogeyd? Beeraha canabka ah runtii waa PGoobta Dhaxalka Adduunka muhiimadda dhaqameed ee dhaqaalaha Boortaqiiska.
Waxaad Pico ku tagi kartaa lix saac gudahood doonta ama diyaarad. Inaad ka tagto Lisbon waa fikradda ugu fiican laakiin sidoo kale waxaad ka bilaabi kartaa Horta. Jasiiradaha Boortaqiiska ah ee aan dib u eegeyno, ma ilaabi karno Flores, jasiiradda ugu sawirada badan dhamaan. Waxay ku dhex jirtaa masraxa Azores, kooxda reer galbeedka dhexdeeda, iyo waqtiga ugu fiican ee la booqan karo waa bartamaha Abriil ilaa bartamaha Oktoobar. Jasiiradda Flores waxaa lagu dhawaaqay keyd Biosphere oo ay leedahay UNESCO in 2009.
Aad ayey u qurux badan tahay oo ay adag tahay in hoy la helo bilaha xagaaga ee halkaas ha aadin oo nasiibku ha go’aansado. Barnaamijka! Waxaad jeclaan doontaa jasiiradda: waad awoodaa socodka, ogaanshaha biyo-dhacyadeeda cajiibka ah, fuulitaanka, dabaasha, daawashada nibiriga, kayak ...
La Ilha da Tavira waxay ku taal badda Atlantic waana wax fiican safarka maalinta. Waxay leedahay jawi aad u wanaagsan oo maalmaha kulul ay aad u camiran tahay. Waa in la yiraahdaa waxay leedahay dhowr boqol oo mitir oo xeeb ah. Jasiirad ku taal super loo diyaariyey dalxiiska markaa waxaa jira makhaayado, baarar, maqaaxiyo iyo shirkado dalxiis oo abaabula maalinta iyo waxqabadkeeda. Waa, sida magaca ka muuqata, Tavira, waxaana lagu gaaraa doon, doomaha iyo tagaasida biyaha.
Tavira Dhererkeedu waa 11 kiiloomitir kaliya laakiin waa xeebaha bacaadka ah iyo biyahooda buluuga ah kaa yeeli maayaan. Intaa waxaa dheer waxaa jira shimbiro badan iyo harooyin iyo halkaas, qurux badan flamingos casaan. Waa maxay show! Jasiirad kale oo qurux badan ayaa ah Jasiiradda Terceira, waa jasiiradda saddexaad ee ugu weyn Azores, inkasta oo aanu ahayn kuwa ugu horumarsan. Laakiin haye, quruxdeedu waxay si dhab ah ugu taal xaaladdan bikro ahaanta ah iyo martigelinta dadkeeda.
Terceira weli waxaa ku yaal Castelo de San Juan Bautista, qalcaddii in mar la diriray Isbaanishka, iyo sidoo kale qofna kama tegi karo halkan iyada oo aan dhadhamin khamri cagaaran, takhasuska deegaanka. Waxaa fiican inaad tagto laga bilaabo Maajo ilaa Oktoobar. Laakiin haddii aad raadineyso xeebo markaa ujeeddada waa Jasiiradda Porto Santo, waqooyiga Madeira. Shaki la'aan halkan waa qaar ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan dalka Boortaqiis, oo leh ciida cad oo qurux badan iyo biyo turquoise ah.
Laakiin Porto Santo sidoo kale waxay leedahay taariikh, ah Guriga Christopher Columbus, tusaale ahaan, kaniisad qarnigii XNUMXaad, dhismayaal qarnigii XNUMXaad… Waxa ugu fiican ee ku saabsan Porto Santo ayaa ah in sidoo kale la booqan karo sanadka oo dhan. Jasiirad yar, laakiin aad u qurux badan. 100% xeebo, quusid iyo quus. Waxaan ku sii siqaynaa dhamaadka liiska: Jasiiradda Faial waa Jasiiradda Buluug, oo ku taal bartamaha Azores oo leh xeebaha cad, magaalada Horta iyo godadka fulkaano.
Sahaminta Caldeira do Faial waa a waa in dalxiis Isla isku day cunnooyinka deegaanka. Goorma ayaa la tagayaa? Intii udhaxaysay May iyo October.
Sidaad u aragto, bil kasta oo sanadka ka mid ah waxaa jira jasiirad Boortaqiis ah oo la booqdo, waxay kuxirantahay nooca waxqabadyada muuqaalka muuqaalka ah ee aad raadineyso laakiin sida iska cad, guud ahaan badda, qorraxda iyo ciidda ayaa caymis ku jira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Portugal » Jasiiradaha ugu quruxda badan Boortaqiiska